နှစ်သစ်ဆုတောင်း... | အိမ်လွမ်းသူ...
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အား လက်ဆယ်ဖြာ ထိပ်မှာမိုး၍ ရိုသေစွာရှိခိုးပါ၏...။
အဝေးမှ ဖေဖေ၊မေမေ၊ကျွန်တော်၏ ချစ်သူနှင့် သူငယ်ချင်းများကျေးဇူးတင်ထိုက်သော ကျေးဇူးရှင်အားလုံး နှင့် လာရောက် အားပေးကျသော ဘလော့သူငယ်ချင်းများ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်း၊စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း များဖြင့်ပြည့်စုံ၍ ပျော်ရွှင်ခြင်းများ ထာဝရပိုင်ဆိုင်ပြီး အလွမ်းများနှင့် ထာဝရကင်းဝေးပါစေ၊ မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံပြီး ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ...!နှစ်သစ်မှအတည် စိတ်မလျော့ပဲ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ပန်းတိုင်းကို အောင်မြင်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းအပ်ပါသည်...!
ဘုရားပုံနှင့်ပိတောက်ပန်းအား google မှယူထားပါသည်..!
9 Response to နှစ်သစ်ဆုတောင်း...
သူငယ်ချင်းလည်း အားလုံးအတွက် ဆုတောင်းပေးထားတဲ့အတိုင်း တစ်ထပ်တည်း ပြန်ရနိုင်ပါစေလို့ ပြန်ဆုတောင်းပေးပါတယ်. :)
အောင်အောင်ရေ ပေးတဲ့ဆုနဲ့လည်း ပြည့်ပါစေကွာ.....မင်းလည်း တောင်းတဲ့ဆုတွေ ပြည့်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်.....
မုန့်လုံးရေပေါ်နည်း ကောက်ညှင် ၃ စ ဆန် ၁ စ ဆားနဲနဲထည့်နယ်ပါ
ရေနွေးအိုဆူအောင်လုပ်ထားပါ ဆူလာရင် မုန့်လုံးလေတွေထည့်ပါ.
ပြန်ပေါ်လာရင် ရေအေးထဲထပ်ထည့်ပြီဆယ်ယူပြီစားလို့ ရပါပြီ
အုန်းသီးလေးတော့မမေ့နဲ့နော် အမအုန်းသီးမရလို့ မလုပ်ဖြစ်သေးဘူး
အကိုလည်းနှစ်သစ်မှာစိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေဗျာ...:)
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့် ပါစေ
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည်ပါစေ အစ်ကို
အစ်ကိုလည်း တောင်းတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ
ပေးတဲ့ ဆုတွေနဲ့ ပြည့်စုံ ပါစေ ညီလေးရေ...
နှစ်သစ် ကူး ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးတဲ့ ညီလေး
ပိတောက်တွေလို လန်းဆန်း မွေးကြိုင် ပါစေ....
ငုဝါပန်းတွေ လို လှပ၀င်းထိန် နိုင်ပါစေ....
လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ညီလေးရေ...
နာ့သယ်ရင်း ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ :D